သမုဒ္ဒရာက ဆယ်ယူရရှိတဲ့ ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ ဘူးသစ် ဖန်တီး | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး သမုဒ္ဒရာက ဆယ်ယူရရှိတဲ့ ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ ဘူးသစ် ဖန်တီး
EMBARGOED TO 0001 WEDNESDAY OCTOBER 25 Ecover undated handout photo of their Ocean Bottle which is to be made with 50% ocean plastic, collected from the beaches of Rio de Janeiro. PRESS ASSOCIATION Photo. Issue date: Wednesday October 25, 2017. The bottle aims to raise awareness of the growing problem of plastics in our oceans. See PA story CONSUMER Plastic. Photo credit should read: Ecover/PA Wire NOTE TO EDITORS: This handout photo may only be used in for editorial reporting purposes for the contemporaneous illustration of events, things or the people in the image or facts mentioned in the caption. Reuse of the picture may require further permission from the copyright holder.
သမုဒ္ဒရာက ဆယ်ယူရရှိတဲ့ ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ ဘူးသစ် ဖန်တီး
ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အိုလံပစ် ပွဲတော်အတွက် ပြင်ဆင်တုန်းက ရီယို ဒီ ဂျနဲရိုး ပင်လယ်အော်က ကောက်ယူရရှိတဲ့ ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ ဘူးသစ်တစ်ဘူး ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဘူးကို သမုဒ္ဒရာထဲက ဆယ်ယူတဲ့ ပလတ်စတစ် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ တခြား ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းတို့နဲ့ လုပ်ထားတာပါ။
၂၀၁၆ ခုနှစ် အိုလံပစ်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်တုန်းက ရီယို ဒီ ဂျနဲရိုး ပင်လယ်အော်မှာ ပလတ်စတစ်တွေ ဆယ်ယူရာမှာ ရှစ်တန်အထိ ဆယ်ယူရရှိပါတယ်။ ဒီပလတ်စတစ်တွေကို Ecover ဆေးကြောသန့်စင်ရည် ထည့်တဲ့ ဘူးတွေအဖြစ် ပြန်ဖန်တီးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပလတ်စတစ် ဘူးသစ်အမျိုးအစားဟာ သမုဒ္ဒရာအတွင်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကြောင့် ရေထူညစ်ညမ်းမှုကို တားဆီးဖို့ မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်လာပါတယ်။
ဒီဘူးကို ဖန်တီးတဲ့ ကုမ္ပဏီကတော့ အခုလို ဖန်တီးမှုဟာ ပထမဆုံး ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၂၀ မှာ ဆေးကြောသန့်စင်ရည်တွေကို ဒီလို ဘူးမျိုးတွေနဲ့သာ ထုတ်လုပ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာပါတယ်။ ဘူးတစ်ဘူးကို စတာလင်ပေါင် ၂ ပေါင် ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သမုဒ်ဒရာက ဆယျယူရရှိတဲ့ ပလတျစတဈတှနေဲ့ ဘူးသဈ ဖနျတီး
ဘရာဇီးနိုငျငံမှာ ၂၀၁၆ ခုနှဈ အိုလံပဈ ပှဲတျောအတှကျ ပွငျဆငျတဲ့အနနေဲ့ ရီယို ဒီ ဂနြဲရိုး ပငျလယျအျောက ကောကျယူရရှိတဲ့ ပလတျစတဈတှနေဲ့ ဘူးသဈတဈဘူး ဖနျတီးလိုကျပါတယျ။ ဒီဘူးကို သမုဒ်ဒရာထဲက ဆယျယူတဲ့ ပလတျစတဈ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးနဲ့ တခွား ပွနျသုံးလို့ရတဲ့ စှနျ့ပဈပစ်စညျး ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးတို့နဲ့ လုပျထားတာပါ။
၂၀၁၆ ခုနှဈ အိုလံပဈပှဲအတှကျ ပွငျဆငျတဲ့ အနနေဲ့ ရီယို ဒီ ဂနြဲရိုး ပငျလယျအျောမှာ ပလတျစတဈတှေ ဆယျယူရာမှာ ရှဈတနျအထိ ဆယျယူရရှိပါတယျ။ ဒီပလတျစတဈတှကေို Ecover ဆေးကွောသနျ့စငျရညျ ထညျ့တဲ့ ဘူးတှအေဖွဈ ပွနျဖနျတီးမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီပလတျစတဈ ဘူးသဈအမြိုးအစားဟာ သမုဒ်ဒရာအတှငျး စှနျ့ပဈပစ်စညျးတှကွေောငျ့ ရထေူညဈညမျးမှုကို တားဆီးဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြ ဖွဈလာပါတယျ။
ဒီဘူးကို ဖနျတီးတဲ့ ကုမ်ပဏီကတော့ အခုလို ဖနျတီးမှုဟာ ပထမဆုံး ဖွဈကွောငျး၊ ၂၀၂၀ မှာ ဆေးကွောသနျ့စငျရညျတှကေို ဒီလို ဘူးမြိုးတှနေဲ့သာ ထုတျလုပျမှာ ဖွဈကွောငျး ကွညောပါတယျ။ ဘူးတဈဘူးကို စတာလငျပေါငျ ၂ ပေါငျ ကသြငျ့မှာ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleအမျိုးသမီး ထက်ဝက်ကျော်ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်မှု ခံရ
Next articleရခိုင်အရေး အထူးသတိထား စောင့်ကြည့်ကာကွယ်ဖို့ လိုကြောင်း တပ်မတော် သတင်းထုတ်